Somaliland oo joojisay duulimaadyadii Muqdisho Itoobiyana ma joojin waa maxay sababta - Awdinle Online
Somaliland oo joojisay duulimaadyadii Muqdisho Itoobiyana ma joojin waa maxay sababta
March 17, 2020 (Awdinle Online) –Guddiga qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortaga cudurka Coronavirus ee uu dhawaan Magacaabey Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxay soo saareen qodobo xasaasi ah oo looga hortagayo faafintaanka Cudurka Coronavirus oo dhibaato xoog leh ku hayo adduunyada.
Guddiga oo soo saaray illaa 6 go’aan, ayaa waxaa lagu mamnuucay duulimaadyadii Caalamiga ahaa ee soo gaari jiray Hargeysa, iyadoo liiska wadamada la mamnuucay lagu soo daray Soomaaliya maadaama Somaliland ay sheegtay inay ka go’day.
Go’aanka Guddiga ayaa lagu sheegay in la joojiyey duulimaadyada ama socaalka dalalka laga helay Cudurka Coronavirus, kuwaas oo kala ah, Kenya Somalia, Shiinaha,Talyaaniga, labada kuuriya,Faransiiska Spain, iyo Kenya laga bilaabi Maalinta berito ah oo ku beegan 19/3/2020.
Sidoo kale go’aanada ayaa waxaa qeyb ka ahaa in goobaha waxbarashada la xiro muddo Afar Todobaad ah, in Masaajida ay waqtiga salaada kusoo koobaan 25 Daqiiqo, in la joojiyo kulamada isu imaatinka ah, in qodobo kale.
Previous articleWeerarkii Janaale Khasaare nooce ah ayaa ka dhashay
Next articleShaqaale ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo Boosaaso lagu dilay .